“मानसिक तनाब र चिन्ता भएकाे अवस्थामा पनि आफ्नाे मनलाई कसरी कन्ट्राेल गर्ने ? जानिराखौ” – Krazy NepaL
November 24, 2020 630
नेपालि समाजमा प्रचलित भनाइ छ, “चिन्ता भनेकाे चि*ताकाे बाटाे हाे ।” जिन्दगीमा अनेक परिस्थिती आउछन्, जहाँ हामी आफैलाइ बिर्सेर चिन्तामा डुबी रहेका हुन्छाैँ ।
सबैभन्दा पहिले त आफु अरूका कारण दुखी भएकाे छु भन्रे कुरा दिमागबाट हटाउनुहाेस् । तपाइ भित्र जुन भावना र विचार आएका छन्, ति तपाइले नै सिर्जना गर्नुभएकाे हाे । “यि मेरा विचार र भावना हुन् । याे उनीहरूकाे जिन्दगी हाेइन, मेराे जिन्दगी हाे । याे उसकाे या उनीहरूकाे बारेमा हाेइन, मेराे बारेमा हाे” भन्रे सम्झिनुहाेस् । मेराे जिन्दगीकाे मालिक म आफु हुँ, त्यसैले मेराे जिवनमा आउने परिस्थितिकाे जिम्मेवार आफु हुँ भन्रे कुरालाइ दिमागमा राख्नुहाेस् ।
अब तपाइले कथामा आफुलाइ कस्ताे अवस्थमा देख्नुहुन्छ ? आफुलाइ त्यहाँ कस्ताे ठाउँमा पाउनुहुन्छ ? कथालाइ विश्लेषण गर्नुहाेस् । के अब तपाइ आफ्नाे बाँकी जिवन कथाकाे त्यही पिडित पात्र बनेर जिउन चाहनुहुन्छ ? के तपाइ याे कथालाइ त्यही दुखद अन्त्यकाे रूपमा लिनुहुन्छ ? या तपाइ याे कथामा एउटा सुखद माड आअाेस् भन्रे चाहनुहुन्छ ? कथाकाे पात्र अथवा आफुलाइ पिडित हाेइन, एउटा हिराे या विजेताकाे रूपमा उभ्याउन चाहनुहुन्छ ?
Prev“एक गुलाफको फुललाइ यसरी विधीसहित प्रयोग गर्नुहोस,बनाउँछ मालामाल,हटेर जान्छ घरको वास्तुदोष र आर्थिक समस्या।नछुटाई पढ्नुहोस”
Next” नयाँ मोडलको ‘बुलेट बाइक’निकै सस्तो मूल्यमा आउदै छ “
नेपालबाट फे’रि बा’हिरि’यो चे’ली’को हे’र्नै न’सकि’ने यौ’न क्रि’याक’लाप (हेरौं भिडियो)